फरक पाटो – Maitri News
Category: फरक पाटो
न्युयोर्कमा तेस्रो जीवाईसी ग्रिन स्कुल सम्मेलन
maitrinews September 20, 2019
न्युयोर्क । न्युयोर्कमा तेस्रो जीवाईसी ग्रिन स्कुल सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले जलवायु पक्षधर नेताहरु, अनुसन्धानकर्ता तथा अभियानकर्ताहरुको विचार, अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै दिगो समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ । सम्मेलनमा जलवायु पक्षधर नेताहरुको अनुभव, विचार तथा कथ्यहरु आदान प्रदान गरिएको थियो । यो तेस्रो वातावरणीय अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलन हो । सम्मेलनले…
क्यानडाको उच्च बेबी ब्राण्ड विविलुभ अब नेपालमा
काठमाडौँ । क्यानडामा बच्चाहरुको निम्ती प्रयोग हुने विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड विविलुभ अब नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता आइएमएस गु्रपअन्तर्गत आइएमएस लिटल स्माइल कम्पनीे विविलुभकोे सामाग्रीहरु भित्र्याएको छ । साना बच्चाहरुका लागि कम्पनीको आफ्नै सोरुमा आइमएस लिटल स्माइल सिटी सेन्टर, कमल पोखरी स्थित छ जुन नेपालकै पहिलो प्रिमियम मल्टी ब्राण्ड सोरुम हो । आफ्नो…
भुजुङवासीको भेलाले बनायो आन्तरिक कानुन
लमजुङ । लमजुङको पर्यटकीय गाउँ भुजुङ गाउँबासीको भेलाले यस वर्षका लागि गाउँभरी मात्र लागु हुने अन्तरीक कानुन बनाएका छन् । गाउँ भेलाले बनाएको कानुनले गाउँमा उत्पादित खाद्यान्न बालीको भाउ, कामदारको दैनिक ज्याला, घिउ–महको मूल्य, चोया तथा ऊनद्वारा निर्मित विभिन्न हस्तकला सामग्रीको मूल्य तोक्ने गर्छ । पाँच दिनसम्म चलेको भेलाले गाउँमा एक वर्षसम्मका लागि नयाँ…
चण्डीगढ विश्वविद्यालयद्वारा नेपाली विद्यार्थीसँग परामर्श
काठमाडौँ । भारतको चर्चित चण्डीगढ विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ४ दिने शैक्षिक परामर्श गरेको छ । विश्व विद्यालयको नेपालमा रहेको भर्ना केन्द्र काठमाडौंको एआईपी एडुसकेशनमा भएको अभियान अगस्त २७ देखि ३० गतेसम्म चलेको थियो । अभियान अन्तरगत प्रत्येक दिन विहान १० बजे देखि साँझ ६ बजेसम्म विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति, विद्यार्थी जीवन, रोजगारीको अवसर, पूर्व…
आइडिया स्टुडियोमा १५०० भन्दा धेरै आइडिया
maitrinews August 21, 2019
काठमाडौँ । आइडिया स्टुडियो नेपाल हरेक व्यक्तिको व्यासायिक सोचलाई उद्यमशिलतासंग जोडेर उद्यमी बन्न प्रेरित गर्दै समाजमा नै व्यवसायिक परिवर्तन गराउने एक उत्कृष्ट माध्यम हो । व्यक्तिको नविन र सकारात्मक सोचले नै नयाँ आवीश्कार हुन सक्दछ र त्यसले समाज र राष्ट्रमा नै महत्वपुर्ण योगदान पुग्न सक्छ भन्ने ध्येयका साथ यस अघि आइडिया स्टुडियोका तिनै वटा…
न्युयोर्क । अमेरिकामा रहेका राष्ट्रवादी नेपालीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ७३ औँ जन्मोत्सव भव्यरुपले मनाएका छन् । ज्याक्सन हाइटस्थित बाम्बो रेस्टुरेन्टमा आयोजित समारोहमा डा. कमल पाण्डेले पूर्वराजाको जन्मोत्सव मनाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेकाले राजाको आवश्यकता परेको बताउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नुभयो । अमेरिका नेपाल कलाकार…
दोस्रो बाल प्रतिभा प्रस्तुति सम्पन्न
न्युयोर्क । एन एन्ड ज्ञ इन्टरटेन्मेन्ट न्युयोर्कले दोस्रो बाल प्रतिभा प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कवियत्री कमला प्रसाईले नेपाली कला संस्कृति, भेषभूषा , नेपाली समुदायको महत्वबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले १५ वर्षअघि यो संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो । गएको शनिबार जुन २९ तारिखका दिन अस्तोरियाको चिल्ड्रेन फेडेरेसनको हलमा भएको बाल प्रतिभा कार्यक्रममा…
न्युयोर्कमा चौथो नेपाल डे परेड
न्युयोर्क । सधै व्यस्त म्यानह्टनको थर्टिएटस्ट्रिट म्याडिसन एभिन्युको सडक आइतबार विल्कुलै फरक थियो । दिउसो १२ बजेबाट बन्द सडक गत वर्ष झै यस पटक पनि मिनि नेपालमय बनेको थियो । नेपालको पुर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिण सबैतिरका नेपालीहरु हातमा मातृभूमि नेपाल र कर्मभूमि अमेरिकाको झण्डा बोकेर नेपाल डे परेडमा नाच्दै गाउदै रमाइरहेका थिए ।…
काठमाडौँ — अन्न र सहकालका देवता भनिने रातो मस्त्येन्द्रनाथको रथयात्रा गर्ने क्रममा शुक्रबार महिलाले रथ तानेका छन् । रथ तान्ने काममा पुरुष मात्रै संलग्न हुँदै आएपनि परम्परा जोगाउँदै महिलाले रथ तानेका हुन् । महिलाहरुले शुक्रबार बिहान ६ बजे लगनखेलमा रथ तानेका हुन् । मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन परिक्रमा गराउने क्रममा लगनखेलको थट्टीटोलमा पुग्दा हराएको र एक जना…
वाई वाई ग्लोकल टिन हिरोको पाँचौ संस्करणका लागि आवेदनको आह्वान
काठमाडौँ । किशोरकिशोरीहरुमा भएको प्रेरणा र उत्साहलाई प्रस्फुटन गरी उनीहरुले समाजमा गरेको प्रभावकारी कार्यलाई कदर र अरु माझ चिनाउने कार्यक्रम ‘वाई वाई ग्लोकल टिन हिरो’, ग्लोकल प्रा.ली. को एक कार्यक्रम हो । यस मन्च मार्फत किशोर किशोरीहरुमा भएको उत्साह, रचनात्मक र सुरुवातको चाहनाको पहिचान गरी राष्ट्रको अन्य किशोर किशोरीहरुलाई उद्यमी सोचाइको विकास गर्न उत्प्रेरित…